IOS 12 Beta 2 waxaa ku jira tixraacyada moodooyinka cusub ee Apple Watch | Wararka IPhone
IOS 12 Beta 2 waxaa ku jira tixraacyada moodooyinka cusub ee Apple Watch
Shalay uun ayaa beta labaad iOS 12 ee iPhone iyo iPad. Xoogaa horumar ah ayaa lagu daray - waa tan liistada - iyo muuqaalka cusub ee Walkie-talkie wuxuu sidoo kale ka muuqanayay muuqaalka beta-kan loogu talagalay horumariyeyaasha. Xusuusnow taas beta-ka dadweynaha ayaa loo maleynayaa inuu soo bixi doono dhamaadka bishaan Juun. Si kastaba ha noqotee, koodhku wuxuu qariyey macluumaad dheeraad ah oo loogu talagalay kuwa mudnaanta leh. Xeerkani wuxuu tixraacayaa moodooyinka cusub ee Apple Watch, wax horeyba ugu jiray shaqooyinka in muddo ah.
Koodhkan waxaa helay soo-saaraha iyo wada-shaqeeyaha dhexdhexaadinta 9to5mac, Guilherme Rambo. Koodhka isha ee beta labaad ee iOS 12 ayaa laga helay Tixraacyo noocyo kala duwan oo Apple Watch ah oo aan weli iib ahayn. In kasta oo aynaan innaga yaabin; waagii hore lambarradan la helay waxay filayeen in ka badan hal imaatin suuqa.
Laakiin ku sii wadida suurtagalnimada cusub ee Apple Watch, aqoonsiyo cusub ayaa ka muuqday lambarka: Watch4.1, Watch4.2, Watch4.3 iyo Watch4.4; taasi waa in la yiraahdo, moodellada aan hadda suuq-geyn, maaddaama taxanaha Apple Watch ay wataan lambarro aqoonsi oo ka socda Watch3.1 illaa Watch 3.4.
Sidoo kale, horumariyaha ayaa sidoo kale helay tixraacyo cusub oo tilmaamaya qalab cusub. Sida aad ku arki karto shaashadda la socota maqaalka, lambarradan ayaa ka muuqda sida MTUD2, MTUK2, MTX92 iyo qaar kale. Goorma ayaa moodooyinkaan cusub la filayaa? Sidaan kuu sheegnay, Sebtember ugu horreyntii: waxay noqon karaan ficilka furitaanka ee iPhone-ka soo socda - saddex inay sax noqdaan - iyo xoogaa dhiirigelin ah oo lagu saadaaliyo in shaashadda Apple Watch Series 4 ay lahaan doonto saami ka sarreeya kan hadda jira. 15% dheeraad ah inay sax noqoto. Xanta qaar ayaa sidoo kale ka digaya in badhamada jirka lagu badalayo badhamada taabashada taabanaya ama kiiska smartwatch uusan sii ahaan doonin laba jibbaare.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 12 » IOS 12 Beta 2 waxaa ku jira tixraacyada moodooyinka cusub ee Apple Watch
TuLotero arjiga ugu fiican ee lagu ciyaaro bakhtiyaanasiibka